Nhau - Yekuvandudza nhoroondo yechiedza simbi villa kumba uye kunze kwenyika
Munguva pfupi yapfuura, mumusika weimba wakavhuvhuta kuputika kwe "mwenje simbi villa mhepo", ichi chinhu chitsva chakonzera vanhu vazhinji kuteerera. Chiedza chesimbi imba yakaonekwa muChina muma1990. Nhasi, hunyanzvi hwekuvaka simbi chivakwa chakura, hunosimudzirwa nenyika, uye hwapinda zviri pamutemo muono weveruzhinji. Saka nyika dzekunze dzakasimukira nzira yekuvaka imba? Nekuda kwekusimbiswa kwekuziva nezvezvakatipoteredza uye kushomeka kwehuni nezvimwe zvinhu, nyika zhinji senge United States, Japan, Britain, Australia, vari kushingairira kusimudzira kushandiswa uye kusimudzira dzimba dzakadzika-simbi.
Pakutanga kwema1960, Australia yakaisa pamberi pfungwa ye "kukurumidza kumisikidzwa kwedzimba dzakagadzirirwa", asi nekuti musika hauna kukura, hauna kugadzirwa zvakanaka. Muna 1987, kwakasimba kutonhora-kwakaumbwa kwakatetepa-kwakavakirwa simbi simbi mamiriro akaonekwa, uye mubatanidzwa mirawo yeAustralia neNew Zealand, se / nzs4600 inotonhorera-yakaumbwa simbi simbi, yakaburitswa ikaitwa muna1996.Rudzi urwu rwesimbi rwune huwandu hwepamusoro hwekubata. Inofananidzwa nehuremu hwakaenzana hwehuni, ingori 1/3 yehuremu hwehuni. Icho pamusoro chakakomberedzwa. Pasi pemamiriro ekusagadziriswa, iko kusimba kunogona kusvika makore makumi manomwe nemashanu.
Chiedza chesimbi dzimba dziri kukura nekukurumidza muUnited States. Muna 1965 dzimba diki dzesimbi dzaingove 15% chete yemusika wekuvaka muUnited States; Muna 1990 yakanga yakwira kusvika pa53 muzana, nepo muna 1993 yakanga yakwira kusvika pa68 muzana uye muna 2000 yakakwira kusvika pa75 muzana. Iyo yekumisikidza, serialization, hunyanzvi, kushambadzira uye kudyidzana kwenzvimbo dzekugara uye zvikamu zvinoda kusvika zana muzana. Kubhadhara michina yekuvaka yakasiyana, zvishandiso uye zviridzwa kunogadzirwa, uye degree rekushambadzira rinosvika 40%.
Mumakore achangopfuura, mwenje simbi keel sisitimu yekuvaka ine inotonhora-yakaumbwa simbi inzira nyowani yekuvaka iyo iri kukura nekukurumidza muEurope neAmerica. Inoshandiswa zvakanyanya mumisha, dzimba, nzvimbo dzinoyevedza, makirabhu emahofisi, zvikoro, zvipatara, zvivakwa zvekutengesa zvichingodaro. MuAustralia, madhora mazana matanhatu emamiriyoni edzimba dzakareruka dzesimbi dzinovakwa gore rega rega zviuru zana nemakumi maviri, zvichiverengera nezve 24% yemutengo webhizinesi rese rekuvaka muAustralia; MuAmerica huwandu hwedzimba dzakavakwa pachishandiswa hurongwa uhwu hwakakwira kubva pamakumi mashanu nemakumi mashanu nepakati pemakore ekuma1990 kusvika pa325,000 muna 2000. Parizvino, rudzi urwu rweimba yesimbi yakareruka rave chimiro chikuru chemapurani munyika dzakasimukira.